कति ट्यांकर भित्रिए, कति रोकिए ? | Jukson
कति ट्यांकर भित्रिए, कति रोकिए ?
भारतले अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता लिएको तेस्रो दिन सोमबार विराटनगर भन्सारमा २७ वटा इन्धन बोकेका ट्यांकरसहित करिब एक सय गाडी भित्रिएका छन् । सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म जोगबनी नाकामा रोकिएर बसेका दुईवटा ग्यासका बुलेट, १४ ट्यांकर डिजल र ११ ट्यांकर पेट्रोलसहित करिब एक सयवटा सवारी विराटनगर भन्सारको यार्डमा भित्रिएका हुन् ।
‘अपराह्नसम्म ६४ वटा मालबाहक सवारी यार्डमा भित्रिसकेको र अन्य आउनेक्रम जारी छ,’ विराटनगर भन्सार प्रमुख कृष्ण बस्नेतले भने । उनका अनुसार राति नौ बजेसम्म भन्सार खुला गरेर सवारी यार्डमा भित्र्याइनेछ । आइतबार साँझ भन्सार भित्रिएका २५ वटा सवारीलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गरेको थियो । प्रहरीले भन्सारको दुई नम्बर ढाटमा धर्नामा बसेका संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालाई हटाएर स्कर्टिङ गराएको थियो ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
सोमबार भारतको पश्चिम बंगालस्थित सिलगुडी टर्मिनल डिपोले ६ ट्यांकर मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएको छ । नेपालको मागअनुसार तत्काल दिन नसकिने भन्दै उसले ६ वटा ट्यांकरमा मात्रै इन्धन भरेको हो । नेपाली पक्षको तीव्र दबाबपछि भारतीय पक्षले तीन ट्यांकर डिजेल, दुई ट्यांकर पेट्रोल र एक ट्यांकर हवाई इन्धन उपलब्ध गराएको मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ । यद्यपि इन्धन लोड भएका ट्यांकर सोमबार राति अबेरसम्म काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका छैनन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडी नेपालतर्फ हिँडे पनि पानीट्यांकी नाकाको जामका कारण नेपाल प्रवेश सहज छैन । भन्सार जाँचपासमा भारतीय पक्षले विलम्ब गर्दै आएकाले पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आइपुग्न अझै समय लाग्ने व्यवसायी बताउँछन् । पालो प्रक्रियामा राखेर भन्सार जाँचपास गर्ने हो भने ती ट्यांकरले मंगलबार पनि नेपाल प्रवेशको अनुमति नपाउने एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कोइरालाले बताए ।
आन्दोलनकारीले पारिबाट ढुंगा हान्दा १० सुरक्षाकर्मी र ५ सर्वसाधारण घाइते
'प्रचण्ड अख्तियारको फन्दामा पर्दैछन्'
संसारकी सर्वाधिक मोटी महिला चाहन्छिन् सलमान खान
भैरहवा महोत्सव २५ माघबाट
मदिरा सेवन गरेर बेहोस हुनेगरि श्रीमती माथी कुटपिट
पोखरामा पहिलोपटक नेवारी चलचित्र सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन